Ungayisebenzisa kanjani i-iOS 10 Control Center (I) | Ngivela kwa-mac
Yize izinguquko zobuhle nezokwakha eze ne-iOS 10 zicashile, ezinye zezici ezisetshenziswe kakhulu zinikeza ushintsho oluthinta kakhulu futhi olulula ukuthola. Lokhu kunjalo ngeSikhungo Sokulawula.
Isikhungo esisha sokulawula se-iOS 10 asigcini ngokuletha izinguquko ezithile zobuhle, kepha futhi sifaka nemisebenzi emisha lokho kukwenza kube lusizo ngokwengeziwe. Ake sibone ukuthi ziyini lezi zindaba nokuthi ungazuza kanjani ngazo.
1 Isikhungo esisha sokulawula
1.1 Ukuzula Isikhungo Sokulawula ku-iOS 10
2 Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezici ezintsha ze-iOS 10:
Isikhungo esisha sokulawula
Isikhungo Sokulawula asisakhiwa ngekhadi elilodwa ehlanganisa izici ezijwayelekile esizijwayele ukuzibona njengethoshi, umshini wokubala noma isitophuwashi. Manje sekuyiqoqo lamakhadi ama-slide amathathu. Kowokuqala sithola izici eziyisisekelo zokumisa, njenge-Wi-Fi, i-Bluetooth noma imodi yendiza. Owesibili unikezelwe uhlelo lokusebenza loMculo, kanti owesithathu wuhlelo lokusebenza lweKhaya ukulawula amadivayisi axhunywe ekhaya eKhaya.
Uma ufuna ukusebenzisa ngokugcwele ukutholakala kokuthola okuhlinzekwa yi-Control Center entsha, qhubeka ufunde lokhu okuthunyelwe lapho sizohlaziya khona ukusetshenziswa ongakwenza ebhokisini ngalinye kulawa amathathu afakiwe nayo yonke imisebenzi yawo.
Kepha ngaphambi kokuthi siqale, ukucaciselwa: uma i-Control Center ye-iPhone yakho inamakhadi amabili kuphela, kungenxa yokuthi usususile uhlelo lokusebenza lwe-Home, oluthakaselwa, phela, uma ungeke ulusebenziseleni ufuna?
Ukuzula Isikhungo Sokulawula ku-iOS 10
Kusuka noma yikuphi ku-iOS 10 (kufaka phakathi isikrini esikhulu uqobo), swayiphela phezulu phansi kwe-iPhone ukuze uvule Isikhungo Sokulawula. Lokhu kuyinto engakashintshi kuze kube manje.
Ithebhu yokuqala yeSikhungo Sokulawula kukhombisa izici eziningi ezazivele zikhona ku-iOS 9 nezinguqulo zangaphambilini Uhlelo lokusebenza lwe-Apple. Ngakho-ke, lapho uzothola isinqamuleli sokuvula nokwenza kungasebenzi imodi yendiza, ukutholwa kwamanethiwekhi e-Wi-Fi, i-Bluetooth, imodi ethi Ungaphazamisi, nenkinobho yokukhiya yokujikeleza. Zonke ziphezulu ekhadini. Ngezansi nje kwazo, uzothola ukukhanya kokukhanya, umugqa okufanele usheleleze ngakwesobunxele noma kwesokudla ukunciphisa noma ukukhulisa ukukhanya kwesikrini ngokulandelana.
Emugqeni wesibili wezinkinobho sithola ushintsho lokuqala lwesikhungo sokulawula ku-iOS 10: izikwele ezimbili eziphakathi nendawo ze-AirPlay Mirroring ne-Share with AirDrop, izindawo zabo zibuyiselwe emuva ngokuqhathaniswa nezinguqulo zangaphambilini. I-AirPlay Mirroring ikuvumela ukuthi ubukise isikrini sakho se-iPhone noma i-iPad kusikrini se-TV nge-Apple TV, ngenkathi inkinobho ye- "AirDrop" ikuvumela ukuthi uguqule phakathi kwe- "All", "Ifonibhuku kuphela" noma unqamule ukwamukelwa kwefayela.
El Imodi yasebusuku Inomugqa ophelele ozinikele kuye yedwa, inkinobho eyodwa enkulu evundlile esivumela ukuthi senze kusebenze noma kusebenze umsebenzi ngaphambi kokuhlelwa kwawo kanye / noma izikhathi zokucisha (ku-iOS 9 kwakuyisithonjana esincane esasiphakathi kwesitophuwashi nesibali) .
Ekugcineni, ezansi kwekhadi lokuqala le-Control Center, kukhona i-flashlight, isibali sikhathi, isibali kanye nokufinyelela okuqonde ngqo kukhamera, okungameleli noma yiluphi ushintsho maqondana ne-iOS 9. i Izinqamuleli ze-3D Touch zohlelo ngalunye- I-flashlight ingashintsha amandla, i-timer ifaka izinketho ezivamile zesikhawu, i-calculator ikuvumela ukukopisha umphumela wokugcina, futhi ikhamera inezinketho eziningi zezithombe.
Njengoba ukwazi ukubona, iSikhungo Sokulawula esisha siveza izici eziningi ezintsha, futhi sisanda kuqala nje. Engxenyeni yesibili yalokhu okuthunyelwe sizobona ukuthi siwasebenzisa kanjani amanye amakhadi amabili asele.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngezici ezintsha ze-iOS 10:
Ungazifaka kanjani futhi uzisebenzise kanjani izitika kumilayezo ye-iOS 10 (II)
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani i-Control Center entsha ku-iOS 10 (I)
Isixazululo senkinga ekufakweni kwe-MacOS Sierra: "ukuqinisekiswa kwesiginesha yomthwalo wokufaka wesifaki akukwenziwanga"